Accueil > Gazetin'ny nosy > Inty sy nday : Andrarezina tokoa !
Inty sy nday : Andrarezina tokoa !
Namaritra ny raharaham-pirenena nandritra ny faran’ny herinandro teo, nanomboka ny zoma, ny fahalasanan’i Manandafy Rakotonirina. Tena mpanao politika 100% izy. Ny sabotsy teo izahay teto amin’ity gazety ity dia efa nanao lahatsoratra nitantara ny ankapoben’ny zotra politika nahafantarana azy.
Eto kosa izahay dia hamaritra ny kolotsaina politika nananan’i Manandafy Rakotonirina. Amin’ny maha-politika azy moa dia tonga amin’ilay hoe “ny hevitra tera-bary ka samy maneho izay fantany”. Azo anokafana ady hevitra koa ny tontolo politika fa tsy misy azo sakanana na tampenam-bava ny amin’izany.
Voalohany aloha dia azo sokajiana ho andrarezin’ny politika Malagasy i Manandafy Rakotonirina. Nanokana ny fiainany iray manontolo tamin’ny politika izy, ary izany no naharetany 50 taona mahery teo anivon’izany sehatra izany. Tsy miteny izahay hoe “filamatra” izany na “henatra” sy sanatria “fahafaham-baraka” fa izay no azo amaritana azy.
Faharoa, azo ambara fa raha ny lanja ara-politikan’i Manandafy Rakotonirina no tombanana, indrindra raha ampitahaina amin’ny tontolom-piainan’ny “mpilalao politika” taty ambadiky ny taona 2000 sy ny talohakelin’izany, dia isan’ny mpanao politika Malagasy maty nahantra i Manandafy Rakotonirina.
Ny mpilalao politika tato anatin’ny 25 taona farany mantsy, ohatra, dia na izy miditra eo amin’ny sehatra politika mba hanan-karena, na efa nahita fomba hafa (matetika tsy mazava) naha-mpanan-karena azy izy dia miditra manao politika mba hahazoana fahefam-panjakana hiarovany ny tenany tamin’izany fihariana “sadasada” izany sy hampitomboany araka izay tratra koa (mbola amin’ny fomba rehetra ihany koa) ny harenany.
I Manandafy Rakotonirina kosa dia isan’ireo mpanao politika Malagasy tsy mba renao hoe nitsikombakomba tamin’ny vahiny tamin’ny fandrobana sy fanondranana antsokosoko volamena na andramena na vatosoa sarobidy, na nanodinkodina volam-panjakana , sy ny hafa. Ny ady hevitra nitranga teto ka nanomezana tsiny an’i Manandafy sy ny MFM dia izy niara-dia tamin’ny olona sasany efa naloam-bahoaka, ohatra, rehefa misy tranga eto amin’ny firenena (Ratsiraka tamin’ny 1982, Ravalomanana tamin’ny 2009, Rajaonarimampianina 2017-2018). Ady hevitra azo sokafana izany. Teo koa ny nivadihan’ny MFM ho mpiara-miombona antoka tao anatin’ny rafitra “liberaly” izay manome lanja ny mpanambola, raha toa ka tany amin’ny sehatra hikatsahana ny tombontsoam-bahoaka tamin’ny alalan’ny fampanjakana ny vahoaka madinika no niforonany tany amboalohany. Mbola ady hevitra azo tohizana koa izany. Nanakianan’ny mpanara-maso politika sasany an’i Manandafy Rakotonirina sy ny MFM koa, izay nifanindran-dalana tao anatin’ny fiovany tarigetra ho any amin’ny fanomezana vahana ny mpanam-bola ny fanandratany avo ny hasin’ny mpamatsy vola iraisampirenena mahazatra (Institution de Bretton Woods) dia ny Banky Mondialy sy ny FMI sy ny manodidina an’izany. Mbola mitohy koa ny ady hevitra sy ny tolona ifanandrinana momba izany maneran-tany sy eto Madagasikara. Tsy resaka “miady amam-paty” akory ny fanamarihana izany na hoe “tsy mbola tokony entina ambony gazety satria mbola ambohitra ny razana”, saingy niniana natao mihitsy mba hametrahana amin’ny toerany ny tsirairay amin’ny tantaran’ity firenena ity.
Tsy azo hamaivanina anefa, na izany na tsy izany, ny fanabeazana politika nataon’ny MFM teto amin’ity firenena ity, satria fanabeazana politika tena niorina tamin’ny foto-kevitra velona no nataony, ary marobe ny manam-pahaizana malagasy sy ny mpandraharaha ara-toekarena ary ny mpisehatra politika teto Madagasikara no novolavolain’ny MFM.
Izany rehetra izany dia nitamberina an-tsaina hatramin’ny zoma teo raha “niamboho” i Manandafy Rakotonirina, ary tena ara-bakinteny fa “andrarezina izy”.